ကျားအစေ့-အကြောရောင်ခြင်း (Epididymitis and Orchitis) – Healthy Life Journal
ဆရာရှင့် တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ Testicles ရောင်တာကလေ။ ဘယ် speciality နဲ့ ပြရမလဲရှင့်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါနော်။
မေးတဲ့သူက အမျိုးသမီး၊ ဖြစ်တဲ့သူက ယောကျာ်း ဟုတ်ပါသလား။ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတာလည်း မသိပါ။ ဆရာဝန်တဦးကိုပြရင် လိုအပ်ရင် ဆက်လွှဲပါမယ်။
အမျိုးသားပါရှင်။ အသက် ၆၀ ဝန်းကျင်ပါ။ ဆရာဝန်မပြရသေးလို့ဆရာ။ ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ ပြရမလဲ မေးကြည့်တာပါ။
ရောဂါမေးတာမဟုတ်ပေမယ့် ဖတ်လိုရင်ဖတ်ဖို့ စာပို့ပါတယ်။
ဒီရောဂါမေးလာသူတွေထဲက ပြုံးစရာတွေ့တာ နှစ်ခါရှိပြီ။ မေးခွန်းထဲက Testicles ဆိုတာယောကျာ်း ဝှေးစေ့ကို ပြောတာပါ။ (ဆောရီး)
ဒိအရင်တယောက် မေးပါတယ်။ “ဆရာမ ဘောနည်းနည်းကျပြီး ကြီးနေပါတယ်။ အဲဒါ မခွဲဘဲနဲ့
ကောင်းပါ့မလားဟင်။ ကျွန်မအမျိုးသားက ခွဲရမှာ ရှက်နေတယ်။ ဆရာမပြောပြပါနော်။” သူ့ကိုတော့ “ကျွန်တော် ဆရာမ မဟုတ်ပါ” လို့နဲ့အစချီပြီး ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ယောကျာ်းတွေမှာ အဲလိုနေရာမှာ အဖြစ်များတာက
၁. Epididymitis အစိရောင်တာ၊
၂. Hernia အူကျရောဂါ၊
၃. Hydrocele မုတ် (မုတ္တ) ရောဂါ၊
၄. Orchitis အကြောရောင်တာ၊
၅. Testicular torsion အစိလိမ်ရောဂါ၊
၆. Varicocele (ဗေရီကိုဆီးလ်) အကြောထုံးရောဂါ၊
၇. Testicular cancerကျားအစိကင်ဆာ။
ကပ္ပယ်အိတ်ထဲက ဝှေးစေ့နာရင် (အပီဒီဒမိုက်တစ်)ကျားအကြောရောင်တာနဲ့ (အော်ခိုက်တစ်) ကျားအစေ့ရောင်တာ တခုဖြစ်ဖြစ်၊ နှစ်ခုတွဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဝှေးစေ့ကနေ သုက်ပိုးနဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်ပေးတယ်။
အပီဒီဒမိုက်တစ်ဆိုတာ သုက်ပိုးတွေကို ကျားအစေ့တွေကနေ သုတ်လွှတ်ကြောဆီကို သယ်ဆောင်ပေးတဲ့ အစေ့အထက်က ခွေနေတဲ့အကြောရောင်တာ ဖြစ်တယ်။ အပီဒီဒမိုက်တစ်က အော်ခိုက်တစ်ထက် အဖြစ်များတယ်။ ဖျားတာ၊ နာတာ၊ ရောင်တာတွေ ရှိလာမယ်။ ဆီးအောင့်တာနဲ့ တွဲလာသေးတယ်။ ချက်ချင်းနဲ့ နာတာရှည် နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရက်တိုဆိုတာ ဆေးကုတာနဲ့ ပျောက်သွားမယ်။ နာတာရှည်ကတော့ ခပ်ဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာပြီး၊ ဆေးကုရင် သက်သာလာပေမယ့် ပျောက်ဖို့ ကြာတတ်တယ်။ ငယ်သူတွေထက် အရွယ်ရောက်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ အော်ခိုက်တစ်ဆိုတာကို ချက်ချင်းဖြစ်၊ ကုရင် ချက်ချင်းပျောက်တယ်။
ဆီးချူပေးတာကနေလည်း ဒီနေရာမှာ လာရောင်တတ်တယ်။
ရက်တို အပီဒီဒမိုက်တစ်ရောဂါက ဗက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ ကလေးတွေမှာဆိုရင် ကျောက်ကပ်၊ ဆီးအိမ်ကနေ ပိုးရောက်လာလို့ ဖြစ်တယ်။ လူပျိုဖော်ဝင်တွေမှာ ၃ ပုံ ၁ ပုံက Mumps orchitis ပါးချိတ်ရောင်အကြောနာကနေ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေကို MMR ကာကွယ်ဆေး အထိုးခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ အရွယ်ရောက်ယောကျာ်းတွေမှာ အများစုက (STD) ခေါ် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဂနိုးရီးယားနဲ့ (ကလာမိုင်ဒီးယား)တွေပါ။ စဖြစ်တော့ ဆီးထွက်ပေါက်မှာ၊ နောက်မှ အစေ့ဆီရောက်လာတယ်။ အသက် နည်းနည်း ပိုကြီးသူတွေဆိုရင် ဆီးလမ်းပိုးဝင်ရာကနေ လာတယ်။ အသက်များများကြီးသူတွေကြတော့ BPH ခေါ်တဲ့ ဆီးကျိတ်ကြီးတာကနေလာတယ်။ ချက်ချင်းဖြစ်တာ၊ ပြန်ဖြစ်ရာကနေ နာတာရှည်ဖြစ်လာစေတယ်။
ရက်တို (အပီဒီဒမိုက်တစ်)ဖြစ်ရာကနေ ပိုးက အစေ့ဆီရောက်လာရင် နှစ်ခုလုံးရောင်တာ ဖြစ်လာရော။
ဘယ်နေရာကနေစစဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီရောဂါဖြစ်သူမှာ ကျားအင်္ဂါနေရာ တစ်ခုထဲမှာ နာတာ၊ ရောင်တာသာမက ပိုးစရှိနေတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း ရောဂါလက္ခဏာတွေ ရှိနေလိမ့်မယ်။ ဆီးထွက်ပေါက်၊ ဆီးအိမ်၊ ကျောက်ကပ်၊ ဆီးကျိတ်နေ ရာတွေ။ ဆီးပူ၊ ဆီးအောင့်၊ ဆီးမသွားနိုင်၊ ပါးချိတ်ရောင်၊ မုတ်ကြီးတာ၊ ဖျားတာ၊ ရှားရှားပါးပါး TB ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်သေးတယ်။
နာတာရှည်ဖြစ်ရင် နာတာ၊ ရောင်တာ၊ နီတာ၊ ကြီးတာတွေ သိပ်မသိသာဘူး။ ဆီးစစ်ရင် ပိုးတွေ့ချင်မှတွေ့တော့မယ်။ ရုတ်တရက် ဖြစ်ရင်တော့ လက္ခဏာတွေ အကုန်လောက်ရှိနေနိုင်တယ်။
ရက်တိုသမားတွေကို ဆေးကုရတာကတော့ ပဋိဇီဝဆေး ၂ပတ်ကြာပေးသင့်တယ်။ Azithromycinနဲ့ Cefixime တွေက Gonorrhoeae နဲ့ Chlamydia ဆိုတဲ့ STD ပိုးတွေကိုနိုင်တယ်။ Doxy­cycline, Ofloxacin, Ciprofloxacin, Levoflo-xacin, Tetracycline နဲ့ Trimethoprim-sulfam ethoxazole ကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်။ TB ကြောင့်ဆိုရင် တီဘီဆေးတွေပေးတယ်။ အနာပျောက်ဆေး Ibuprofen or Naproxen တွေက နာတာသာမက ရောင်တာကိုပါ သက်သာစေတယ်။ တချို့ကြ သိပ်နာလွန်း-ရောင်လွန်းလို့ ဆေးရုံတက်ကုစေရတယ်။ အပူကပ်ပေးတာ လိုချင်လိုမယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာကို အခုအခံနဲ့ ထားရတယ်။ လှုပ်ရှားရင်၊ လမ်းသွားရင် နာသူတွေကို အိပ်ရာထဲနေစေရတယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ Orchiectomy ခွဲစိတ်ပြီး Epididymis ကို ထုတ်ပြစ်ရတယ်။
နာတာရှည်သမားတွေဆေးအကြာကြီး သောက်ရမယ်။ လတွေအထိ ကြာနိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးလိုရင် Epididymectomy ခွဲထုတ်လိုက်ရတတ်တယ်။ အစေ့ကို ချန်ထားနိုင်လို့ ကျားဟော်မုန်းဆက်ထွက်နေမှာပါ။
ခပ်ဆင်ဆင်ရောဂါတွေရှိတယ်။ Varicocele (ဗေရီကိုဆီးလ်)ဆိုတာ အဲဒီနေရာက သွေးပြန်ကြော တွေထုံးနေတာ။ Cyst အရည်အိတ် ဖြစ်တာ။ Testicular torsion ဆိုတာ ရုတ်တရက် Spermatic cord အကြောလိမ်ပြီး နာလာတာ။ အစေ့ကို သွေးမလျှောက်တာ ဖြစ်စေတယ်။ Spermatocele ဆိုတာက သုက်ပိုးတွေ စုဝေးနေတဲ့ အိတ်ဖြစ်လာတာ။ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ မနာဘူး။ ဝှေးစေ့ကင်ဆာလည်း ရှိတယ်။
ယောကျာ်းမှာ ဒီရောဂါရှိနေရင် သူ့ဖြစ်ရတာက STD ဆိုရင်တော့ သူ့အဖော်အမျိုးသမီးကို ကူးနိုင်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံး တပြိုင်တည်း ဆေးကုရမယ်။ ဖြစ်တာက ပါးချိတ်ရောင်တာနဲ့ တီဘီကြောင့်ဆိုရင် ကလေးရနိုင်စွမ်းကို လာထိခိုက်တယ်။
Azithromycin (အဇစ်သရိုမိုင်စင်) ဆေးပြား၁g တခါတည်းသောက်ရမယ်။ Ceftriaxone 400 mg တခါတည်းနဲ့တွဲသောက်ရင် (ဂနိုးရီးယား) အတွက်ကောင်းမယ်။
Doxycycline ဒေါက်ဆီဆိုက်ကလင်းဆေးတောင့် (ဆစ်ဖလစ်) အစပိုင်းဖြစ်တာအတွက် တခါသောက် 100mg ကို တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂ ပတ်သောက်ပါ။ တကယ်လို့ ဖြစ်နေတာက ၁ နှစ်လောက်ရှိနေသူ ဆိုရင် ၄ပတ်ကြာသောက်ပါ။ (ဆစ်ဖလစ်) နောက်ပိုင်း ဖြစ်နေရင် တခါသောက် 100mg ကို တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ပတ်သောက်ပါ။
Related Items:Featured2, Male, men sex, Sex